» प्रविण र किरण फाईनलमा पक्का ?
प्रविण र किरण फाईनलमा पक्का ?
४ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:५०
चन्द्र घलान,मकवानपुर, ४ भदौ । नेपाल आईडल सिजन ३ अब फाईनलको नजिक पुगेको छ । फाईनलको नजिक पुगेसँगै फाईनलमा पुग्ने दाबेदाहरुका बारेमा पनि दर्शकहरुको चासो बढेको छ । यो साता फाईनलिष्टहरु पनि घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत साताको रिजल्ट अनुसार उत्कृष्ट ४ मा परेका सज्जा चौलागाई र केविन ग्लान तामाङ खतराको घेरामा छन् किनभने उनीहरु दुबै बटम थ्रीमा परेका थिए । त्यस्तै गत साता किरण कुमार भुजेलले सर्वाधिक भोट ल्याउनुका साथै शोका सर्वाधिक चर्चित प्रतियोगी प्रविण बेड्वालले सुरक्षित अवतरण गरेका थिए । दर्शक श्रोताहरुले किरण र प्रविण फाईनलमा पुग्ने पक्का भएको समेत चर्चा गर्न थालेका छन् । के साँच्चै प्रविण र किरण फाईनलमा पुग्ने पक्का नै भएको हो त ? निर्णय नआउन्जेल यो कुरा भन्न सहज छैन । हेर्नुहोस् भिडियो फिचर–
प्रविण र किरण मध्ये प्रविण शोमा नै संगीतका उस्ताद भनेर चिनिएका छन् भने किरण भर्सटाईल सिंगरका रुपमा चिनिएका छन् । यी दुबै प्रतियोगीहरुले संगीत विषयमा स्नातक गरेका छन् । उनीहरुमध्ये किरणले धेरै अफिसियल गीतहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने प्रविणले केही साता अघिमात्र गीतहरु सार्वजनिक गरेका छन् । गीत पपुलारिटिका हिसाबले यी दुबैको अफिसियल गीतहरु सर्वाधिक चर्चित भएको देखिन्छ । दर्शकमाझ यी दुबैको निक्कै क्रेज छ । प्रविणलाई नै आईडलको विजेता मान्नेहरु त झन धेरै देखिएका छन् । यता किरणको प्रस्तुति र गायनमा डुबेका दर्शक श्रोताहरुले पनि उनलाई नै नेपाल आईडलका रुपमा लिईसकेका छन् । उनीहरुमध्ये प्रविणले एकपटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका छन् भने किरणले वाईल्ड कार्ड राउण्डमा सहित २ पटक सर्वाधिक भोट प्राप्त गरेका छन् । उनीहरुमध्ये प्रविणले २ पटक बटम थ्रीको सामना गरेका छन् भने किरणले एक पटक बटम थ्रीको सामना गरेका छन् ।
प्रविणले नेपाल आईडलको स्टेजमा अहिलेसम्म ११ वटा अवार्ड जितेका छन् । प्रविणले ७ वटा पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड र ४ वटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स आफ द विक अवार्ड जितेका छन् । उनले एकपटक सर्वाधिक भोट पनि प्राप्त गरेका छन् । नेपाल आईडलको स्टेजमा संगीतका उस्ताद भनेर चिनिएका प्रविण नेपाल आईडल सिजन ३ मा ऐतिहासिक प्रस्तुति दिने प्रतियोगीहरुमध्येका एक हुन् । प्रविण नेपाल आईडल सिजन ३ मा सुमधुर आवाजका कारण चिनिएका छन् । उनी २३ वर्षका छन् । बुटवल अडिसनबाट छनौट हुँदै उत्कृष्ट ४ को यात्रा तय गरेका प्रविणले कक्षा १० सम्म गाउँमा नै अध्ययन गरेर काठमाडौँको बसाई सुरु गरे । काठमाडौँ आएर त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएका प्रविण पछि संगीत विषयमा नै अध्ययन गर्न भारतको तमिलनाडुमा पुगे । त्यहाँबाट नै उनले संगीतमा स्नातक गरेका हुन् । स्नातक पश्चात ‘जात्रा’ नामक ब्याण्डमा आवद्ध भएका प्रविण बुवाको आर्मी बनाउने सपनालाई त्यागेर संगीतमा लागेका थिए ।
त्यस्तै वाईल्ड कार्ड राउण्ड जित्दै उत्कृष्ट ४ सम्म पुगेका किरणले नेपाल आईडलमा अहिलेसम्म ५ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले ४ वटा अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड र एउटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका छन् । अडिसन राउण्डदेखि नै चर्चामा रहेका किरणले स्कुले जिवनदेखि नै गाउन सुरु गरेका हुन् । कक्षा ६ मा अध्ययन गर्दाको समयमा नै उनले गीत गाएको अनुभव छ । दाईले गाएको देखेर दाईकै नक्कल गर्दै गीत गाउन थालेका किरण एसएलसी सकाएपछि वि.सं. २०६५ सालमा काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए । काठमाडौँमा आएर सँगीत विषय अध्ययन गरेका किरणले ललितकला क्याम्पसबाट संगितको औपचारिक शिक्षा लिएका छन् । संगितमा नै स्नातक गरेका किरणले वि.सं. २०६५ सालतिर पहिलो पटक आफ्नै गीत निकालेका थिए ।
आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई प्रविण र किरणमध्ये को फाईनलमा पुग्छ जस्तो लाग्छ ? यी दुई प्रतियोगीहरु नै फाईनलमा पुग्लान् वा नपुग्लान् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् । साथै प्रविधिसम्बन्धी जानकारीका लागि हाम्रो नयाँ च्यानल टेक्निकल सहयोगीलाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।